Kuputsika kwemusika wemasheya pakupera kwegore | Ehupfumi Zvemari
Kutengesa pamitengo yazvino, ndizvo zvakajairwa kune vashoma nevepakati varimi kuti vazvibvunze kana ino isiri iyo nguva yekupinda mumisika yemari. Kudonha kwemakesi makuru emusika wemasheya kwave kuitika mumazuva ekupedzisira egore uye kumanikidza kwekutengesa kwave kumisikidzwa nekristaro kujekesa uye kusvika kune imwe. zvisingaonekwe nhanho mumakore achangopfuura. Zvese zviri zviviri maererano nemisika yemari yenyika uye avo vari kunze kwemiganhu yedu.
Ehezve, iyi yakanga isiri iyo mamiriro akafanoonekwa nechikamu chikuru chevaongorori vezvemari vakafungidzira kuti misika yemasheya yaizopedzisira iine simba rakakosha rekutenga. Mukupedzisira hazvigone kuve nenzira iyi uye iyo kusava netariro yakazvimisikidza pachayo pakati pevashambadzi vadiki nepakati vari kudzikisira kuratidzwa kwavo kune equities nenzira iyo yavasina kuita kwemakore mazhinji uye mazhinji. Asi mushure mezvose, ino nguva inotyiwa nevatengesi vevatengesi yauya.
Zvese izvi zvinowedzeredzwa nenyaya yekuti kuparara kwemusika wemasheya uku kunofambidzana nehuwandu hwakakura hwezvibvumirano. Mune mamwe mazwi, kune vakawanda varimari vari kugadzirisa nzvimbo dzavo mumusika wekutengesa. Nenzira iyi, maSpanish equities achavhara gore rino mune imwe yeiyo yakaderera nhanho zvekudzidzira kwekupedzisira. Kunyangwe chakaipisisa pane zvese ndechekuti iyo uptrend yakatyoka chose kumagumo. Mufambiro wakashata wekutora zvinzvimbo kubva panguva dzino chaidzo.
1 Donha uye dzokera kumatanho mazana manomwe nemazana mashanu
2 Shanduko yemafambiro mumusika wemasheya
3 Chiziviso chekuderera kwehupfumi
4 Kuendeswa kwemari kuyerera
5 Maitiro ekuvandudza
6 Mhedzisiro yakaipa yebhizinesi
Donha uye dzokera kumatanho mazana manomwe nemazana mashanu
Chimwe chezvinhu zvakakosha kwazvo mune yakasarudzika indekisi yeSpanish equities, iyo Ibex 35, ndeyekuti haina kukwanisa kuchengetedza nzvimbo dzayo dze laterality mairi yaifamba mukati megore rakaipa iri kumisika yemari. Pamatanho e8.800 mapoinzi uye kuti ndakamutungamira mazuva ano kuti ave kuyedza rutsigiro rwekupedzisira rwechiratidzo waakasiya uye ari pamapoinzi mazana masere nemazana mashanu uye kuti zvichanetsa kubata nekuda kwekumanikidzwa kwekutengesa nevatengesi.
Kana danho iri rakaputswawo, harisisina tsigiro inosvika mazana manomwe nemakumi mashanu poindi, inova poindi yekutora inopindirana ne Brexit makore maviri chete apfuura. Mukuita, izvi zvinoreva kuti equities yaizoramba iine 11% yekudzika trajectory kubva ikozvino mazinga ekutengesa, iri kutaura zvakawanda kubva pakuona kwekurasikirwa. Hazvishamisi kuti pane zvakawanda zvaunogona kurasikirwa kubva ikozvino zvichienda uye zvishoma kwazvo kuwana.
Shanduko yemafambiro mumusika wemasheya
Chero zvazvingaitika, pane chokwadi chisingapindurike uye ndizvozvo misika yemakambani yabva pane yakajeka mamiriro ezvinhu kuenda kudhorobha. Pasina kuona pamatanho api pasi pasi anowirirana anogona kuumbwa uye ayo anoshanda senzvimbo yekureva kuzarurazve zvigaro mune chero epasi rese makwere. Chero zvazvingaitika, kusahadzika kukuru kubva zvino zvichienda mberi ndekwekuti izvi zvichagara kwenguva yakareba sei. rova, kunyangwe vaongorori vezvemari vachifungidzira kuti inogona kuramba iine makore anopfuura yaidikanwa mune aya maitiro ekugadzirisa.
Imwe yemasimba akasimba nezve kubuda kweiyi maitiro kuri kuuya kubva kumisika ye United States, mushure mekumhanya kwenguva refu kubva makore akatevera kunetsekana kwehupfumi pakati pa2007 na2008. Mairi kudzokororwa kwave kuri kumahombekombe kwakakwirira kupfuura zana muzana. Kubva pane ino maonero, zvine musoro kuti izvi zvigadziriso zvinoitika sezvo, sevashambadzi vadiki nepakati vanowanzo taura, hapana chisingaperi mumusika wemasheya. Iko isingasimuke kana kuwira nekusingaperi sezvingaratidzwa mumisika yequity mumakore apfuura.
Chiziviso chekuderera kwehupfumi
Chero zvazvingaitika, kufamba uku mumisika yemari kunogona zvakare kunzwisiswa sekufambira mberi kwe dambudziko rinotevera mune hupfumi hwenyika dzese. Mupfungwa iyi, haugone kukanganwa kuti misika yezvemari inowanzo regedza zviitiko zvepedyo. Kune rimwe divi, ichi ichokwadi chiri kufungidzirwa nechikamu chakanaka chemishumo yehupfumi nevamiriri vakasiyana vezvemari vanosimbisa kumira mukukura kwenyika. Usakanganwa kutora imwe nzira mune yekudyara chikamu.
Kune rimwe divi, rese data rehupfumi rinokanganisa izvi uye zviri kuitwa nemisika yemasheya kutenderera pasirese iri kutora pane ino nyowani uye inoshungurudza mamiriro. Iko pasina chokwadi chakanakisa chichaonekwawo mabhizimusi mikana, pakati pezvimwe zvikonzero nekuti mitengo yemigove ichave inokwikwidza. Iine mukana wekutarisa iyo ichave yakakwira zvakanyanya kupfuura kusvika zvino. Naizvozvo, iwe zvakare unofanirwa kuona izvo zvakanaka mamiriro emamiriro ezvinhu aya anotya vese vadiki nepakati varimi.
Kuendeswa kwemari kuyerera
Chimwe chinhu chekutora kubva nhasi zvichienda mberi ndechekuti chikamu chakanaka chemari yevatengesi chiri kuendeswa kune imwe mari yemari yakakosha. Semuenzaniso, zvigadzirwa zve zvigadzirwa zvebhangi, senge madhipatimendi epfupi-pfupi, manotsi ekuvimbisa kubhengi kana maakaundi anobhadhara zvakanyanya. Vakaona kuti mumazuva achangopfuura vakaona sei purofiti yavo ichikura semitero yezvemari nehurumende dzinomiririra nyika.
Mune imwe tsinga, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti varimi vakatsika mabhureki ekutora zvinzvimbo mumisika yemari. Zvirinani kusvikira paine tsanangudzo yakajeka yezvingaitika mumusika wemasheya mumakore mashoma anotevera. Chokwadi ichi chiri kutungamira ku kutengesa kuri kubata nekujeka kukuru nezve kutenga. Chinhu chiri kuranga misika yequity neicho chakasimba. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva pakuona kwezvakakosha.
Muzviitiko zvese, hauzove nesarudzo kunze kwekutora nhevedzano yemaitiro ehungwaru kuti uchengetedze zvipo zvako zvemari pakurwisa kufamba mumisika yekutengesa zvinhu. Uye izvo zvinongogumira mukuvandudza anotevera matipi atinozokufumura pazasi:
Aihwa zviise pachena kune mashandiro izvo zvisina kudikanwa panguva ino. Hazvishamisi kuti zvichave zvichibatsira zvakanyanya kumirira dzimwe nzira dzekudyara.
Iwe unofanira ongorora kuti kubva ikozvino pane zvakawanda zvaunofanira kurasikirwa pane kukunda. Neichi chikonzero, hazvisi nyore kuti iwe umhanyire mune imwe nguva yekutsinhana kwemasheya mashandiro.
Iva mukati kukwana kwakazara Iwo mukana wakanaka wekuti iwe uende kune dzimwe nzira dzekudyara maunogona kuita kuti mari ichengetwe kubva panguva dzino chaidzo.
Chero zvazvingaitika, kana uchizosarudza kuisa mari mumusika wemasheya unogara uri pasi pemipiro yemari ye shoma shoma. Ichave iri zano rakanakisa rekudzivirira zvaunofarira semudhara mudiki nepakati.
Inogona kunge iri nguva yekudyara iyo iri kunyatsonakidza, asi chero bedzi nguva yekugara iripo pakati nepakati. Hazvina kumboitika munguva pfupi apo iwe une mavhoti ese ekukuvara.
Chimwe chinhu chakaita kuti kambani iyi inyorwe pamatanho azvino mhedzisiro isina kusimba yebhizinesi yavakaratidza munzvimbo dzekupedzisira. Nekuwedzera kwakakosha muchikwereti chako urikubvunza kugona kweako mutsara webhizinesi. Iine yakajeka kujekeswa yekutengesa pakutenga, iine kusimba hakuwanzoonekwa mukudzidzira kwakapfuura. Uye nenzira iyi haikwiri, kure nazvo. Ichi ndicho chinhu chaunofanirwa kuongorora nekufunga kukuru kuti ufungisise kuti zvakafanira here kuisa njodzi mari yako mukutengesa masheya.
Kune rimwe divi, iwe unenge usina sarudzo kunze kwekunyatsoteerera kubva gore rinouya pane zvabuda zvebhizinesi zvinoburitswa mukota yega yega. Ivo vanokupa iwe inopfuura imwechete chiratidzo nezve izvo zvaunofanirwa kuita pane imwe nhambo uye nekudaro voita kuti nzvimbo dzako dziwane pundutso pamusoro pezvimwe zvehunyanzvi zvekufunga. Mupfungwa iyi, zano rakanakisa nderekutiza kubva kumakambani akanyorwa anoratidza zvakakosha zvikwereti. Zvakare nekuve nesarudzo iri nani yezvivigiro izvo zvinoumba rako rinotevera rekudyara portfolio zvichibva pane izvi zvakakodzera maitiro.
Chero zvazvingaitika, ramba uchifunga kuti une mamwe makore akaomarara ekudyara pamusika wemasheya uye nekudaro uchafanirwa kuendesa mamwe matanho akasarudzika. Hazvishamisi kuti matanda akakwirira mumwedzi iri kuuya. Kunyangwe paine chokwadi chekuti mamwe akasarudzika rebound anogona kukuvhiringidza iwe pazano iwe rauchazoshandisa mumazuva mashoma anotevera. Uri kuisa njodzi yakawanda sezvakangoita mari yako yaunochengeta.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Kuputsika kwemusika wemasheya pakupera kwegore
Yekuzvidira yekusiya tsamba